Friday June 21, 2019 - 15:03:37 in News by Hadhwanaag News
Saraakiisha Amniga Qaranka Mareykanka ayaa beeniyey warbixino ay warbaahinta ku sheegeen in madaxweyne Donald Trump
Trump ayaa markii horey ansixiyey weeraro ka dhan ah goobo cayiman oo ku yaalla Iran, sida goobo military iyo raadaar, sida uu qoray wargeyska New York Times.
Washington Post iyo warbaahino kale ayaa sidoo kale shaaciyey in madaxweynaha uu amray weerar jawaab ah.
Dhinaca kale, wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in saraakiil ka tirsan dowladda Iran ay u sheegeen inay Trump ka heleen fariin lasoo marsiiyey dalka Cuman, oo loogu sheegay inay fishaan weerar.
Reuters ayaa sheegtay in jawaabta Tehran ee deg degga ay ahayd inay ka digtay cawaaqib gobol iyo mid caalami ah, haddii Mareykanka uu weeraro kusoo qaado.
Ciidamada Ilaalada Kacaanka Iran ayaa shalay sheegay inay soo rideen diyaarad drone oo basaas ah oo Mareykanka uu leeyahay, taasi oo sida ay sheegeen kusoo xadgudubtay hawada dalkaas, meel ku dhow Marinka Hurmuz.
"Diyaaradda basaaska RQ-4 Global Hawk ee Mareykanka ayaa waxaa lagu dhuftay gantaal markii ay kusoo
xadgudubtay hawada Iran ee dusha biyaha gobolka Hormozgan” ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay Ilaalada kacaanka.
Sarkaal Mareykan ah ayaa sheegay in diyaaradda lasoo riday ay tahay nooca MQ-4C Triton, hase yeeshee ay ku
duuleysay hawada caalamiga ee Marinka Hormuz.